၂ – စ်ာနပစၥေယာ (Jhānapaccayo) ( file2of 9) – စ်ာနပစၥေယာ(ပါဠိ ႏွင့္ ပါဠိျမန္မာျပန္) – Dhamma Training Center
၂ – စ်ာနပစၥေယာ (Jhānapaccayo) ( file2of 9) – စ်ာနပစၥေယာ(ပါဠိ ႏွင့္ ပါဠိျမန္မာျပန္)
၂ – စ်ာနပစၥေယာ(Jhānapaccayo) Zawgyi
(အပိုင္း ၂/၉) ( file2of 9)
စ်ာနပစၥေယာ(ပါဠိ ႏွင့္ ပါဠိျမန္မာျပန္)
၄၃၁။ ကုသေလာ ဓေမၼာ ကုသလႆ ဓမၼႆ စ်ာနပစၥေယန ပစၥေယာ။ (ကု၊ ကု-၁)
Kusalo dhammo kusalassa dhammassa jhānapaccayena paccayo.
ကုသိုလ္တရားသည္ ကုသိုလ္တရားအား စ်ာနပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။
ကုသလာနိ စ်ာနဂၤါနိ သမၸယုတၱကာနံ ခႏၶာနံ စ်ာနပစၥေယန ပစၥေယာ။
Kusalāni jhānaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ jhānapaccayena paccayo.
၀ိတက္၊ ၀ီစာရ၊ ပီတိ၊ သုခ၊ ဧကဂၢတာတည္းဟူေသာ ကုသိုလ္စ်ာန္အဂၤါ-၅ပါး ပစၥည္းတရား တို႔သည္ ထိုစ်ာန္ႏွင့္ အတူ ယွဥ္၍ျဖစ္သည့္ ေ၀ဒနာကၡႏၶာ၊ သညာကၡႏၶာ၊ သခၤါရကၡႏၶာႏွင့္ ၀ိညာဏကၡႏၶာတည္းဟူေသာ နာမ္ခႏၶာတို႔အား စ်ာနပစၥယ သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။
(စ်ာန္အဂၤါ ၅-ပါး၏ တရားကိုယ္မွာ ၀ိတက္၊ ၀ီစာရ၊ ပီတိ၊ ဧကဂၢတာ၊ ေ၀ဒနာတို႔ ျဖစ္ပါသည္။)
ကုသေလာ ဓေမၼာ အဗ်ာကတႆ ဓမၼႆ စ်ာနပစၥေယန ပစၥေယာ။ (ကု၊ ဗ်ာ-၂)
Kusalo dhammo abyākatassa dhammassa jhānapaccayena paccayo.
ကုသိုလ္တရားသည္ အဗ်ာကတတရားအား စ်ာနပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။
ကုသလာနိ စ်ာနဂၤါနိ စိတၱသမု႒ာနာနံ ႐ူပါနံ စ်ာနပစၥေယန ပစၥေယာ။
Kusalāni jhānaṅgāni cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo.
၀ိတက္၊ ၀ီစာရ၊ ပီတိ၊ သုခ၊ ဧကဂၢတာတည္းဟူေသာ ကုသိုလ္စ်ာန္အဂၤါ ၅-ပါး ပစၥည္းတရား တို႔သည္ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ စိတၱဇရုပ္တို႔အား စ်ာနပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။
ကုသေလာ ဓေမၼာ ကုသလႆ စ အဗ်ာကတႆ စ ဓမၼႆ စ်ာနပစၥေယန ပစၥေယာ။ (ကု၊ကု၊ ဗ်ာ-၃)
Kusalo dhammo kusalassa ca abyākatassa ca dhammassa jhānapaccayena paccayo .
ကုသိုလ္တရားသည္ ကုသိုလ္တရားအား လည္းေကာင္း၊ အဗ်ာကတတရားအားလည္းေကာင္း စ်ာနပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။
ကုသလာနိ စ်ာနဂၤါနိ သမၸယုတၱကာနံ ခႏၶာနံ စိတၱသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ စ်ာနပစၥေယန ပစၥေယာ။
Kusalāni jhānaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo.
၀ိတက္၊ ၀ီစာရ၊ ပီတိ၊ သုခ၊ ဧကဂၢတာတည္းဟူေသာ ကုသိုလ္စ်ာန္အဂၤါ ၅-ပါး ပစၥည္းတရား တို႔သည္ ထိုစ်ာန္ႏွင့္ အတူ ယွဥ္၍ျဖစ္သည့္ ေ၀ဒနာကၡႏၶာ၊ သညာကၡႏၶာ၊ သခၤါရကၡႏၶာႏွင့္ ၀ိညာဏကၡႏၶာတည္းဟူေသာ နာမ္ခႏၶာတို႔အားလည္းေကာင္း၊ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ စိတၱဇရုပ္တို႕အားလည္းေကာင္း စ်ာနပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။
အကုသေလာ ဓေမၼာ အကုသလႆ ဓမၼႆ စ်ာနပစၥေယန ပစၥေယာ။ (အကု၊ အကု-၁)
Akusalo dhammo akusalassa dhammassa jhānapaccayena paccayo.
အကုသိုလ္တရားသည္ အကုသိုလ္တရားအား စ်ာနပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။
အကုသလာနိ စ်ာနဂၤါနိ သမၸယုတၱကာနံ ခႏၶာနံ စ်ာနပစၥေယန ပစၥေယာ။
Akusalāni jhānaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ jhānapaccayena paccayo. (1)
၀ိတက္၊ ၀ီစာရ၊ ပီတိ၊ သုခ၊ ဧကဂၢတာတည္းဟူေသာ အကုသိုလ္စ်ာန္အဂၤါ ၅-ပါး ပစၥည္းတရားတို႕သည္ ထိုစ်ာန္ႏွင့္ အတူယွဥ္၍ျဖစ္သည့္ ေ၀ဒနာကၡႏၶာ၊ သညာကၡႏၶာ၊ သခၤါရကၡႏၶာႏွင့္ ၀ိညာဏကၡႏၶာတည္းဟူေသာ နာမ္ခႏၶာတို႔အား စ်ာနပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။
အကုသေလာ ဓေမၼာ အဗ်ာကတႆ ဓမၼႆ စ်ာနပစၥေယန ပစၥေယာ။ (အကု၊ ဗ်ာ-၂)
Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa jhānapaccayena paccayo.
အကုသိုလ္တရားသည္ အဗ်ာကတတရားအား မဂၢပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။
အကုသလာနိ စ်ာနဂၤါနိ စိတၱသမု႒ာနာနံ ႐ူပါနံ စ်ာနပစၥေယန ပစၥေယာ။
Akusalāni jhānaṅgāni cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo.
၀ိတက္၊ ၀ီစာရ၊ ပီတိ၊ သုခ၊ ဧကဂၢတာတည္းဟူေသာ အကုသိုလ္စ်ာန္ အဂၤါ-၅ပါး ပစၥည္းတရားတို႕သည္ စိတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည့္ စိတၱဇရုပ္တို႔အား စ်ာနပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။
အကုသေလာ ဓေမၼာ အကုသလႆ စ အဗ်ာကတႆ စ ဓမၼႆ စ်ာနပစၥေယန ပစၥေယာ။ (အကု၊ အကု၊ ဗ်ာ-၂)
Akusalo dhammo akusalassa ca abyākatassa ca dhammassa jhānapaccayena paccayo.
အကုသိုလ္တရားသည္ အကုသိုလ္တရားအားလည္းေကာင္း၊ အဗ်ာကတတရားအားလည္းေကာင္း၊ မဂၢပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။
အကုသလာနိ စ်ာနဂၤါနိ သမၸယုတၱကာနံ ခႏၶာနံ စိတၱသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ စ်ာနပစၥေယန ပစၥေယာ။
Akusalāni jhānaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo.
၀ိတက္၊ ၀ီစာရ၊ ပီတိ၊ သုခ၊ ဧကဂၢတာတည္းဟူေသာ အကုသိုလ္စ်ာန္အဂၤါ ၅-ပါး ပစၥည္းတရား တို႕သည္ ထိုစ်ာန္ႏွင့္ အတူ ယွဥ္၍ျဖစ္သည့္ ေ၀ဒနာကၡႏၶာ၊ သညာကၡႏၶာ၊ သခၤါရကၡႏၶာႏွင့္ ၀ိညာဏကၡႏၶာတည္းဟူေသာ နာမ္ခႏၶာတို႔အားလည္းေကာင္း၊ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ စိတၱဇရုပ္တို႕အားလည္းေကာင္း စ်ာနပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။
အဗ်ာကေတာ ဓေမၼာ အဗ်ာကတႆ ဓမၼႆ စ်ာနပစၥေယန ပစၥေယာ။ (ဗ်ာ၊ ဗ်ာ-၁)
Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa jhānapaccayena paccayo.
အဗ်ာကတတရားသည္ အဗ်ာကတတရားအား မဂၢပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။
၀ိပါကာဗ်ာကတာနိ ကိရိယာဗ်ာကတာနိ စ်ာနဂၤါနိ သမၸယုတၱကာနံ ခႏၶာနံ စိတၱသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ စ်ာနပစၥေယန ပစၥေယာ။
Vipākābyākatāni kiriyābyākatāni jhānaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo.
၀ိပါက္အဗ်ာကတ၊ ကိရိယာအဗ်ာကတျဖစ္ေသာ ၀ိတက္၊ ၀ီစာရ၊ ပီတိ၊ သုခ၊ ဧကဂၢတာ တည္းဟူေသာ စ်ာန္အဂၤါ-၅ပါး ပစၥည္းတရား တို႕သည္ အတူယွဥ္၍ ျဖစ္ေသာ ေ၀ဒနာကၡႏၶာ၊ သညာကၡႏၶာ၊ သခၤါရကၡႏၶာႏွင့္ ၀ိညာဏကၡႏၶာဟူေသာ နာမ္ခႏၶာတို႔အားလည္းေကာင္း၊ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္တို႔အားလည္းေကာင္း စ်ာနပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။
ပဋိသႏၶိကၡေဏ ၀ိပါကာ ဗ်ာကတာနိ စ်ာနဂၤါနိ သမၸယုတၱကာနံ ခႏၶာနံ ကဋတၱာ စ ႐ူပါနံ စ်ာနပစၥေယန ပစၥေယာ။
Paṭisandhikkhaṇe vipākābyākatāni jhānaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo.
ပဋိသေႏၶအခါ ပဋိသေႏၶ၀ိပါက္စိတ္၌ ရွိေသာ ၀ိတက္၊ ၀ီစာရ၊ ပီတိ၊ သုခ၊ ဧကဂၢတာ တည္းဟူေသာ စ်ာန္အဂၤါ-၅ပါး ပစၥည္းတရား တို႔သည္ စ်ာန္တရားတို႔ႏွင့္ အတူယွဥ္၍ျဖစ္ေသာ ေ၀ဒနာကၡႏၶာ၊ သညာကၡႏၶာ၊ သခၤါရကၡႏၶာႏွင့္ ၀ိညာဏကၡႏၶာ ဟူေသာ နာမ္ခႏၶာတို႔အားလည္းေကာင္း၊ ပဋိသေႏၶကမၼဇ႐ုပ္တို႔အား လည္းေကာင္း စ်ာနပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။
၁၇ – ဈာနပစ္စယော (Janapaccya) Pyidaungsu – Unicode
(အပိုင်း ၂ /၉) ( file2of 9)
၂- ဈာနပစ္စယော(ပါဠိ နှင့် ပါဠိမြန်မာပြန်)
၄၃၁။ ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ ဈာနပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ကု၊ ကု-၁)
ကုသိုလ်တရားသည် ကုသိုလ်တရားအား ဈာနပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
ကုသလာနိ ဈာနင်္ဂါနိ သမ္ပယုတ္တကာနံ ခန္ဓာနံ ဈာနပစ္စယေန ပစ္စယော။
Kusalāni jhānaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ jhānapaccayena paccayo. (1)
ဝိတက်၊ ဝီစာရ၊ ပီတိ၊ သုခ၊ ဧကဂ္ဂတာတည်းဟူသော ကုသိုလ်ဈာန်အင်္ဂါ-၅ပါး ပစ္စည်းတရား တို့သည် ထိုဈာန်နှင့် အတူ ယှဉ်၍ဖြစ်သည့် ဝေဒနာက္ခန္ဓာ၊ သညာက္ခန္ဓာ၊ သင်္ခါရက္ခန္ဓာနှင့် ဝိညာဏက္ခန္ဓာတည်းဟူသော နာမ်ခန္ဓာတို့အား ဈာနပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
(ဈာန်အင်္ဂါ ၅-ပါး၏ တရားကိုယ်မှာ ဝိတက်၊ ဝီစာရ၊ ပီတိ၊ ဧကဂ္ဂတာ၊ ဝေဒနာတို့ ဖြစ်ပါသည်။)
ကုသလော ဓမ္မော အဗျာကတဿ ဓမ္မဿ ဈာနပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ကု၊ ဗျာ-၂)
ကုသိုလ်တရားသည် အဗျာကတတရားအား ဈာနပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
ကုသလာနိ ဈာနင်္ဂါနိ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနံ ရူပါနံ ဈာနပစ္စယေန ပစ္စယော။
ဝိတက်၊ ဝီစာရ၊ ပီတိ၊ သုခ၊ ဧကဂ္ဂတာတည်းဟူသော ကုသိုလ်ဈာန်အင်္ဂါ ၅-ပါး ပစ္စည်းတရား တို့သည် စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သည့် စိတ္တဇရုပ်တို့အား ဈာနပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ စ အဗျာကတဿ စ ဓမ္မဿ ဈာနပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ကု၊ကု၊ ဗျာ-၃)
Kusalo dhammo kusalassa ca abyākatassa ca dhammassa jhānapaccayena paccayo.
ကုသိုလ်တရားသည် ကုသိုလ်တရားအား လည်းကောင်း၊ အဗျာကတတရားအားလည်းကောင်း ဈာနပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
ကုသလာနိ ဈာနင်္ဂါနိ သမ္ပယုတ္တကာနံ ခန္ဓာနံ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနဉ္စ ရူပါနံ ဈာနပစ္စယေန ပစ္စယော။
ဝိတက်၊ ဝီစာရ၊ ပီတိ၊ သုခ၊ ဧကဂ္ဂတာတည်းဟူသော ကုသိုလ်ဈာန်အင်္ဂါ ၅-ပါး ပစ္စည်းတရား တို့သည် ထိုဈာန်နှင့် အတူ ယှဉ်၍ဖြစ်သည့် ဝေဒနာက္ခန္ဓာ၊ သညာက္ခန္ဓာ၊ သင်္ခါရက္ခန္ဓာနှင့် ဝိညာဏက္ခန္ဓာတည်းဟူသော နာမ်ခန္ဓာတို့အားလည်းကောင်း၊ စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သည့် စိတ္တဇရုပ်တို့အားလည်းကောင်း ဈာနပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
အကုသလော ဓမ္မော အကုသလဿ ဓမ္မဿ ဈာနပစ္စယေန ပစ္စယော။ (အကု၊ အကု-၁)
Akusalo dhammo akusalassa dhammassa jhānapaccayena paccayo .
အကုသိုလ်တရားသည် အကုသိုလ်တရားအား ဈာနပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
အကုသလာနိ ဈာနင်္ဂါနိ သမ္ပယုတ္တကာနံ ခန္ဓာနံ ဈာနပစ္စယေန ပစ္စယော။
Akusalāni jhānaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ jhānapaccayena paccayo.
ဝိတက်၊ ဝီစာရ၊ ပီတိ၊ သုခ၊ ဧကဂ္ဂတာတည်းဟူသော အကုသိုလ်ဈာန်အင်္ဂါ ၅-ပါး ပစ္စည်းတရားတို့သည် ထိုဈာန်နှင့် အတူယှဉ်၍ဖြစ်သည့် ဝေဒနာက္ခန္ဓာ၊ သညာက္ခန္ဓာ၊ သင်္ခါရက္ခန္ဓာနှင့် ဝိညာဏက္ခန္ဓာတည်းဟူသော နာမ်ခန္ဓာတို့အား ဈာနပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
အကုသလော ဓမ္မော အဗျာကတဿ ဓမ္မဿ ဈာနပစ္စယေန ပစ္စယော။ (အကု၊ ဗျာ-၂)
အကုသိုလ်တရားသည် အဗျာကတတရားအား မဂ္ဂပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
အကုသလာနိ ဈာနင်္ဂါနိ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနံ ရူပါနံ ဈာနပစ္စယေန ပစ္စယော။
ဝိတက်၊ ဝီစာရ၊ ပီတိ၊ သုခ၊ ဧကဂ္ဂတာတည်းဟူသော အကုသိုလ်ဈာန် အင်္ဂါ-၅ပါး ပစ္စည်းတရားတို့သည် စိတ်ကြောင့် ဖြစ်သည့် စိတ္တဇရုပ်တို့အား ဈာနပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
အကုသလော ဓမ္မော အကုသလဿ စ အဗျာကတဿ စ ဓမ္မဿ ဈာနပစ္စယေန ပစ္စယော။ (အကု၊ အကု၊ ဗျာ-၂)
အကုသိုလ်တရားသည် အကုသိုလ်တရားအားလည်းကောင်း၊ အဗျာကတတရားအားလည်းကောင်း၊ မဂ္ဂပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
အကုသလာနိ ဈာနင်္ဂါနိ သမ္ပယုတ္တကာနံ ခန္ဓာနံ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနဉ္စ ရူပါနံ ဈာနပစ္စယေန ပစ္စယော။
ဝိတက်၊ ဝီစာရ၊ ပီတိ၊ သုခ၊ ဧကဂ္ဂတာတည်းဟူသော အကုသိုလ်ဈာန်အင်္ဂါ ၅-ပါး ပစ္စည်းတရား တို့သည် ထိုဈာန်နှင့် အတူ ယှဉ်၍ဖြစ်သည့် ဝေဒနာက္ခန္ဓာ၊ သညာက္ခန္ဓာ၊ သင်္ခါရက္ခန္ဓာနှင့် ဝိညာဏက္ခန္ဓာတည်းဟူသော နာမ်ခန္ဓာတို့အားလည်းကောင်း၊ စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သည့် စိတ္တဇရုပ်တို့အားလည်းကောင်း ဈာနပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
အဗျာကတော ဓမ္မော အဗျာကတဿ ဓမ္မဿ ဈာနပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ဗျာ၊ ဗျာ-၁)
အဗျာကတတရားသည် အဗျာကတတရားအား မဂ္ဂပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
ဝိပါကာဗျာကတာနိ ကိရိယာဗျာကတာနိ ဈာနင်္ဂါနိ သမ္ပယုတ္တကာနံ ခန္ဓာနံ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနဉ္စ ရူပါနံ ဈာနပစ္စယေန ပစ္စယော။
ဝိပါက်အဗျာကတ၊ ကိရိယာအဗျာကတဖြစ်သော ဝိတက်၊ ဝီစာရ၊ ပီတိ၊ သုခ၊ ဧကဂ္ဂတာ တည်းဟူသော ဈာန်အင်္ဂါ-၅ပါး ပစ္စည်းတရား တို့သည် အတူယှဉ်၍ ဖြစ်သော ဝေဒနာက္ခန္ဓာ၊ သညာက္ခန္ဓာ၊ သင်္ခါရက္ခန္ဓာနှင့် ဝိညာဏက္ခန္ဓာဟူသော နာမ်ခန္ဓာတို့အားလည်းကောင်း၊ စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သော စိတ္တဇရုပ်တို့အားလည်းကောင်း ဈာနပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
ပဋိသန္ဓိက္ခဏေ ဝိပါကာ ဗျာကတာနိ ဈာနင်္ဂါနိ သမ္ပယုတ္တကာနံ ခန္ဓာနံ ကဋတ္တာ စ ရူပါနံ ဈာနပစ္စယေန ပစ္စယော။
ပဋိသန္ဓေအခါ ပဋိသန္ဓေဝိပါက်စိတ်၌ ရှိသော ဝိတက်၊ ဝီစာရ၊ ပီတိ၊ သုခ၊ ဧကဂ္ဂတာ တည်းဟူသော ဈာန်အင်္ဂါ-၅ပါး ပစ္စည်းတရား တို့သည် ဈာန်တရားတို့နှင့် အတူယှဉ်၍ဖြစ်သော ဝေဒနာက္ခန္ဓာ၊ သညာက္ခန္ဓာ၊ သင်္ခါရက္ခန္ဓာနှင့် ဝိညာဏက္ခန္ဓာ ဟူသော နာမ်ခန္ဓာတို့အားလည်းကောင်း၊ ပဋိသန္ဓေကမ္မဇရုပ်တို့အား လည်းကောင်း ဈာနပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။